Wifi passwords via ADB
Common locations where the wifi credentials are stored in plain text are: /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf/data/wifi/bcm_supp.conf/data/wifi//data/etc/wifi//data/misc/wifi/Copied From : http://android.stackexchange.com/questions/21296/how-can-i-find-a-saved-wi-fi-password
The OAuth extension requires both PEAR (which enables you to install the package) and libpcre3-dev, which enables the OAuth package to be compiled. To install the packages and confirm that OAuth is enabled, enter the following commands in the order shown: apt-get install php-pear apt-get install libpcre3-dev pecl install oauth If the following displays, you must edit your php.ini file to find the OAuth library: configuration option “php_ini” is not set to php.ini location
You should add “extension=oauth.so” to php.ini Open php.ini inatext editor (location in /etc/php5/apache2/) and add the following anywhere in php.ini: [OAuth] extension=oauth.so Save your changes to php.ini and restart the Apache web server.
503 ErrorMagento version ကို upgrade ပီးမှာ 503 အယ်ရာဖြစ်တာက root directory ထဲမှာ maintenance.flag ဆိုတာရှိနေလို့ ပါ။အဲဒါကို ဖျက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။500 Error 500 အယ်ရာပြတာကတော့ file permission တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ အဲဒါအတွက် အောက်က ဖိုင်တွေကို ၇၅၅ ပေးလိုက်ရင်ပြန်ဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ CHMOD 755 the following:
- magento/js/* ပြီးရင်တော့ browser cookie/ cache တွေရှင်းပြီးတော့ magento backend ထဲကနေ system=> cache management မှလဲ ရှင်းပေးလိုက်ရင် ပြန်ဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ refrence : http://www.measureddesigns.com/magento-503-error-upgrade/ Thanks ANDREW TAYLOR
Call to undefined method Illuminate\_Cookie\_CookieJar::get()
ဒီအယ်ရာက Sentry သုံးထားတဲ့laravel 4.0 ကနေ 4.2 ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ပေါ်တဲ့ အယ်ရာပါ။
4.0 တုန်းကတော့ Sentry က version 2.0 ပဲရှိသေးတယ်။အခုက laravel 4.2 ပြောင်းလိုက်တော့ Sentry 2.0 က အလုပ်မလုပ်ပဲ အဲဒီ အယ်ရာပြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် composer.json ထဲက sentry မှာ 2.0.* ကို 2.1.* ကိုပြောင်းလိုက်ပြီး composer update လုပ်လိုက်ရင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သွားပါတယ်။
Oh! Yes Yes Force In Ubuntu Terminal update/upgrade
ဒီကွန်မန်းက ကိုကိုရဲ သုံးတာ တွေ့ဖူးတာကြာပီ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင် သူက နေအုန်း ငါ update/upgrade လုပ်ခဲ့ဦးမယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးရင်သူက yes yes force လေးလုပ်ပြီးဆင်းသွားရော။ လေးစားပါတယ်ဆရာ :D ဒီတခါတော့ ကျုပ်အလွတ်ရသွားပြီ။
ပုံမှန်ဆိုရင် upgrade ပြီးရင် Yes ကိုရွေးပေးမှ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေသွင်းမှာပါ။ Yes ရွေးစရာမလိုပဲ အလိုလျောက် သွင်းသွားဖို့အတွက် အောက်ကပုံစံအတိုင်း သုံးလို့ရပါတယ်။
sudo apt-fast update; sudo apt-get --yes --force-yes upgrade
အဲဒါဆိုရင် ပထမအဆင့်က update လုပ်မယ်။
ဒုတိယဆင့်က upgrade လုပ်မယ်။ဒေါင်းပြီးရင် သူ့အလိုလို အကုန်လုပ်လုပ်သွားမယ်။ update လုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆင်းရတဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါဆရာရေ။
Error: couldn't connect to server 127.0.0.1:27017
အဲလိုပြသနာဖြစ်ရင် အောက်က နှစ်ကြောင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အောက်က command ကိုသုံးပြီး ဘာပြသနာဖြစ်လဲဆိုတာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Array key ကို random ယူခြင်း။
php array ထဲက keys တွေကို random ထုတ်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိမှာပါ။
အောက်က ပုံစံအတိုင်းသုံးရင် ဆင်ပြေပါတယ်။
$cities = array(1 => yangon ,2=> mandalay ,3=> Pathein ,4=> Dawei);
$random_key = array_rand($cities, 1);
array_rand ဆိုတဲ့ function သုံးရမှာပါ။ $cities က တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ array ဖြစ်ပြီး 1 က တော့ ဘယ်နှစ်ခုဆွဲမလဲလို့ ရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို php.net မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Source : http://www.homeandlearn.co.uk/php/php6p7.html
To Sweet HearT